फिल्म "कृ" का लागि अनमोल के.सी. लाई ५० लाख पारिश्रमिक ?? – Nepal Sandesh
फिल्म "कृ" का लागि अनमोल के.सी. लाई ५० लाख पारिश्रमिक ??
नायक अनमोल केसी चलचित्र क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा मात्र छैनन्, महंगा पनि बन्दै गएका छन् । अनमोल एक मात्र यस्ता सुपरस्टार हुन्, जसलाई चलचित्रमा लिएको खण्डमा निर्माताको लगानी सुरक्षित हुने पक्का जस्तै हुन्छ । चार वटा हिट चलचित्र दिइसकेका अनमोलको पाँचौ चलचित्र ‘कृ’ माघ २६ गतेबाट रिलिज हुँदैछ ।
यो चलचित्रका लागि अनमोलले २० लाख पारिश्रमिक लिएका थिए । उनै, अनमोललाई ‘कृ’ छायांकनको क्रममा केही चलचित्रबाट ३० लाख पारिश्रमिकको समेत अफर आएको थियो । जुन चलचित्रमा अनमोलले काम गरेनन् ।
अब, उनै अनमोलका लागि ५० लाखसम्मको अफर आएको खबरले चलचित्र बजार चर्चामा छ । अनमोललाई केही निर्माताले चलचित्रमा काम गर्नका लागि ५० लाखको पारिश्रमिक अफर गरेका छन् । अनमोलले यी चलचित्रमा काम गर्ने वा नगर्ने बिषयमा अझै पक्का गरिसकेका छैनन् ।
अनमोलका पिता भूवन केसीले भने-‘हो, अनमोललाई केही चलचित्रबाट ५० लाखसम्मको अफर आएको छ । उनले, निर्माता सुनिलकुमार थापा, निर्देशक सिमोस सुनवार र सुरेन्द्र पौडेलले अनमोललाई ५० लाखको अफर गरेको सुनाए ।’
सुनिलले आफू ५० लाखसम्म दिन तयार रहेको बताएको भूवनले बताए । यता, निर्देशक झरना थापाले भने यो कुराको खण्डन फेसबुकमार्फत गरेकी छिन् । उनले एउटा कलाकारलाई ५० लाखसम्म दिएर अफर गर्दा चलचित्रको मुनाफा कती लाग्ला भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । उनले, कुनै पनि कलाकारलाई आफूले ५० लाखमा अफर नगरेको समेत फेसबुक मार्फत स्पष्ट पारेकी छिन् ।